Wasaarada arimaha gudaha oo daah furtay shirka aqoon iswiidaarsiga federaaleynta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaarada arimaha gudaha oo daah furtay shirka aqoon iswiidaarsiga federaaleynta
Wasaarada arimaha gudaha oo daah furtay shirka aqoon iswiidaarsiga federaaleynta
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimha Gudaha Federalka iyo dib u hishiisiinta ee Xukuumadda Soomaaliya Cali Maxamed Maxamuud ayaa ugu horey sharaxay waxa loga hadli doono maalmaha uu socdo aqoon isweydaariga.
“Wasaaradda Arrimaha gudaha waxaa ka go’an in la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya Federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaana loo baahanyahay inaan wax badan ka kororsano fikradaha ay is weydaarsanaaan ka qeyb galayaasha” ayuu yiri Agaasimaha guud.
Qaar kamid xubnaha matalayaay maamul goboleedyada iyo Xoghayaha guud ee Gudiga madaxa Banaan ee xuduudaha iyo Federalka Liibaan Cali Salaad ayaa u mahadceliyay Wasaarada arrimaha Gudaha oo ka shaqeyneysa howlaha culus ee federaaleynta.
Wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimha Gudaha, Federalka iyo dib u hishiisiinta ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullahi Faarax Wehliye ayaa si rasmi ah furay madasha aqoon isweydaarsiga ee ku saabsan Arrimha awoodda dowladda Goboleedyada iyo Dolwada dhexe marka laga eego Federaaleynta dallka, waxaana uu sheegay in ay muhiimtahay la barto Federaaleynta aduunka ka jirto.
Previous articleshirkadaha duulimaadyada oo soo dhaweyay qorshaha ay wasarada duulista kula soo wareegtay arimaha xujeyda
Next articleWasiirka arimaha dibada xukumada soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka talyaani soomaliya u fadhiya